ကာဗွန်သံမဏိပြွန်ကြိတ်လိုင်း ZG60 - တရုတ် Wuxi Linbay Machinery
က Wall & ခေါင်မိုး panel ကိုလိပ်ဖွဲ့စည်းစက်
စက်ဖွဲ့စည်း Cable ကို Tray ထဲကလိပ်
စက်ဖွဲ့စည်း Downspout ပိုက်လိပ်
စက်ဖွဲ့စည်းအဝေးပြေး Guardrail လိပ်
PU Sandwich က Panel ကိုထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
စက်ဖွဲ့စည်းလှိမ့ Shutter Slat လိပ်
စက်ဖွဲ့စည်းအဆင့် Beam ကိုလိပ်
စက်ဖွဲ့စည်း Struts နှင့်ရထားလိပ်
စက်ဖွဲ့စည်းလုံးနှင့် Track လိပ်
စက်ဖွဲ့စည်းကို C Purlin လိပ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ clients များ / မိတ်ဖက်
စက်ဖွဲ့စည်းမြှောင်းပုံ Panel ကိုလိပ်
စက်ဖွဲ့စည်းမိုးမိုး Tile လိပ်
စက်ဖွဲ့စည်းနှစ်ချက် Layer Panel ကိုလိပ်
စက်ဖွဲ့စည်း Ridge Cap လိပ်
စက်ဖွဲ့စည်း Z ကို Purlin လိပ်
CZ Purlin လျင်မြန်စွာလိပ်ဖွဲ့စည်းစက်
Description ZG60 tube mill line Diameter of welded tubes Φ16-63.5mm Wall thickness of welded tubes 1.0-3.0mm Speed of tube welding 40-80M/min Power of major motor 132KW Power of high frequency welder 200KW Basic componets1.Uncoiler→Shearing and butt-welder→Vertical-type accumulator→Forming machine→Water cooling tank→Sizing machine→Computer cutting saw→Run-out table 2.Hydraulic uncoiler→Shearing and butt-welder→Horizontal-type accumulator→Forming machine→Water cooling tank→Sizin...
FOB စျေး: အမေရိကန် $ 11,000-30,000 / စက်
Min.Order အရေအတွက်: 1 စက်
အာမခံကာလ:2နှစ်
ဖေါ်ပြချက် ZG60 ပြွန်ကြိတ်လိုင်း
ပြွန်ဂဟေ၏မြန်နှုန်း 40-80M / မိနစ်
အခြေခံပညာ componets စက်→ရေအအေးအကြံပေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း→ 1.Uncoiler →တွေညှပ်နှင့်တင်းပါး-ဂဟေဆော်လုပ်ငန်း→ဒေါင်လိုက်-type အမျိုးအစားစုဆောင်းခြင်း→ SIZE စက်→ကွန်ပျူတာဖြတ်တောက်ခြင်း→ Run ကိုထွက်စားပွဲပေါ်မှာကိုမြင်လျှင်
2.Hydraulic uncoiler →→ SIZE စက်စက်→ရေအအေးအကြံပေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း→ Horizontal-type အမျိုးအစားစုဆောင်းခြင်း→မှေးညှပျမြားနှငျ့တင်းပါး-ဂဟေဆော်လုပ်ငန်း→အေး→ Run ကိုထွက်စားပွဲပေါ်မှာကိုမြင်လျှင်
ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးကိုချဲ့ထွင်နိုင်ရန်အတွက်, ငါတို့ရှိသမျှသည်ဖောက်သည်ဂဟေစက်စက်ရုံသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် us.At ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အတူဝယ်ယူစေ machine.Welcome welding ပြွန်ထုတ်လုပ်ရန်တရုတ်အကြီးဆုံးဂဟေဆော်စက်ကုမ္ပဏီနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကျနော်တို့အဓိကအားဖြင့်မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းကာဗွန်သံမဏိပိုက်ထုတ်လုပ် ဂဟေဆော်စက်, etc မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းသံမဏိပိုက်ဂဟေဆော်စက်နှင့်ပလပ်စတစ်ပိုက်ဂဟေဆော်စက်, ငါတို့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်အများဆုံးပိုက်အချင်း 273mm ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံတပြင်လုံးကိုလိုင်း၏အသီးအသီးအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ရန်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့တိကျစွာအရည်အသွေးနှင့်ပေးပို့များ၏ရက်စွဲကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး, တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစံလွန်ပြီဖြစ်သောအသီးအသီးမှိုဖောက်သည်များ၏လက်ထံသို့စေလွှတ်ရနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
F ကို ဥပဒဇယား:
ယခင်: ကာဗွန်သံမဏိပြွန်ကြိတ်လိုင်း ZG45-50
နောက်တစ်ခု: ကာဗွန်သံမဏိပြွန်ကြိတ်လိုင်း ZG76
4. Roll ဖွဲ့စည်းတစ်ခွင်
WUXI LINBAY Machinery CO ။ , LTD မှ
2nd ကြမ်းပြင်, No.23-26.27 Xinfengyuan Fangqian လမ်း Liangxi လမ်းမကြီး Xinwu ခရိုင်, Wuxi, တရုတ်
ဗီယက်နမ််နှစ် post ကိုလိပ်ဖွဲ့စည်းစက်တွေ
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်စျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်. မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များအဘို့ကိုသင့်အီးမေးလ်ထားခဲ့ပါကျေးဇူးပြုပြီးကျနော်တို့ကို 24 နာရီအတွင်းအဆက်အသွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။